पिएसजीमा कसले कति कमाउँछन् ? | Hamro Khelkud
पिएसजीमा कसले कति कमाउँछन् ?
पेरिस (एजेन्सी)– पेरिस सेन्ट जर्मेन (पिएसजी) युरोपियन फुटबलको पावर हाउस बन्दै गइरहेको छ । टोलीमा अहिले चर्चित खेलाडीहरुको जमघट पनि छ । पिएसजीले खेलाडीका लागि ठूलो धनराशी खर्चदै आएको छ । त्यसमध्ये क्लबका सबैभन्दा बढी पारिश्रमिक लिने ५ खेलाडी यी हुन् ।
५. एन्जल डी मारिया
म्यानचेस्टर युनाइटेडमा खासै प्रभावकारी हुन नसकेका डी मारिया पिएसजीमा भने जमेका छन् । उनी अहिले क्लबबाट साप्ताहिक २ लाख ३० हजार पाउन्ड पारिश्रमिक लिन्छन् । विश्वका उत्कृष्ट खेलाडी मध्येका एक डी मारियाले टोलीको पहिलो खेलमा ह्याट्रिक गरेका थिए । उनको पूर्व क्लब रियल म्याड्रिडसँग हुने च्याम्पियन्स लिग अन्तिम १६ को पहिलो लेगमा डी मारियाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
पिएसजीका कप्तान सिल्भा उच्च पारिश्रमिक लिने टोलीका खेलाडीको सुचिमा चौथो नम्बरमा पर्दछन् । लामो समयदेखि क्लबमा आबद्ध रहेका उनले साप्ताहिक २ लाख ७० हजार पाउन्ड लिने गरेका छन् । सन् २०१२ मा मिलानबाट पिएसजी पुगेयता उनी टोलीका महत्वपूर्ण सदस्य रहँदै आएका छन् । उनको नेतृत्व क्षमता र स्तर हेर्दा तत्काल उनलाई प्रतिस्थापन गर्ने खेलाडी अहिले टोलीमा छैन ।
युवा स्ट्राइकर बाप्पेले साप्ताहिक रुपमा क्लबबाट ३ लाख १० हजार पाउन्ड बुझ्ने गरेका छन् । रियल म्याड्रिडसहित केहि ठूला क्लबले उनीमाथि चासो देखाएपनि उनी अन्ततः फ्रान्समै बस्ने निर्णयमा पुगे । मोनाकोबाट सिजनको सुरुआतमा लोनमा पुगेका बाप्पले अर्को सिजन क्लबसँग स्थायी सम्झौता गर्नेछन् । क्लब पुगेयता उनले उच्च प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।
युरोपियन च्याम्पियन बन्ने पिएसजीको लक्ष्य अनुरुप क्लबले पहिलो भित्राएका खेलाडी हुन काभानी । पाँच वर्षमा उनी क्लबका सर्वाधिक गोलकर्ता बनेका छन् । उनले ज्लाटान इब्राहिमोभिचको कीर्तिमानलाई पछि उछिनिसकेका छन् । साप्ताहिक रुपमा ३ लाख २० हजार पाउन्ड पारिश्रमिक लिने गरेका काभानीले आफ्नो भूमिकामा न्याय गर्दै आएका छन् ।
सिजनको सुरुआतमा नेयमार निकै चर्चामा रहे । बार्सिलोनमा रहँदा सम्भव सबै उपाधि जितेका नेयमार नयाँ चुनौतिका साथ पिएसजी पुगेका थिए । क्लबका सर्वाधिक गोलकर्ता भन्दा उनी झन्डै दोब्बर कमाउछन् । उनले साप्ताहिक रुपमा ६ लाख ३० हजार पाउन्ड बुझ्ने गरेका छन् । पिएसजी पुगेयता २६ खेल खेलिसकेका नेयमार २७ गोल गर्नुका साथै १६ एसिस्ट गरिसकेका छन् । उनको आगमनपछि पिएसजीले युरोपियन च्याम्पियन बन्ने सपना देख्न थालेको छ ।